Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
IZA no manana olona mety amin'ny asa
Home » Lahatsoratra » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » IZA no manana olona mety amin'ny asa
IZAY misy akony amin'ny fiainako
Nihombo kohaka kely aho tamin'ny faran'ny herinandro (na dia tsy nandehandeha tany ivelan'ny faritry ny ascenseur sy ny trano fanasan-damba aza aho). Raha marina marimarina, misy fotoana izay nanokafako ny varavarankeliko, ary tsy nisy tany lolo teo am-baravarankely, na ravina notsofina teo ambonin'ny latabatro, na tetika kely misy fanahy maloto aza nahita ahy. ary, nanomboka ny alahady, dia reko nanolotra kohaka kely tsy tapaka.
Ny saiko avy hatrany dia nandeha tamin'ilay toe-javatra ratsy indrindra: COVID-19 io, ary tsy ho afaka miaina intsony aho tsy ho ela, ny havokavoko dia ho toy ny vera kely amin'ny tara-pahazavana, rivotra entina (na dia tsy tsara torohevitra aza). midina ny tendako milamina ary ho faty aho… na, na dia niaina aza aho (ary 80/20 ny tranga mety hitranga manoloana an'io tranga io), dia ho naratra ny havokavoko, ati-doha tsy miasa, na fampahatsiahivana ara-pitsaboana mahatsiravina hafa fa nanjo ahy ity - noho ny olona mandeha matory amin'ny faran'ny andro ao amin'ny White House.
Raha tsy misy fanontaniana dia variana tanteraka amin'ny fahasalamako aho - manomboka amin'ny COVID-19 ka hatramin'ny fikorontanan'ny fitaintainanana. Manahy ny nifiko ihany koa aho. Miaraka amin'ny mpitsabo nify sy mpitsabo nify “any ivelan'ny birao”, ny aretin-nify dia miteraka krizy. Nilazana aho fa afaka miantso ny orinasako fiantohana ary mahazo referral, saingy tsy manome fampiononana lehibe ho ahy izany. Te hahita ny mpitsabo nify aho - toy ny tamin'ny andro taloha. Manahy koa aho sao ho tonga maimaika, na marary fo, na hanapoizina ny sakafo. Inona no mitranga raha mifoha maraina aho amin'ny kitrotro sy ny mumps, ny fahitana manjavozavo, na ny fivontosan'ny ati-doha? Eny, nandany fotoana be loatra amin'ny quarantine aho - variana amin'ny fahasalamako (misaotra, Donald).
Tiako apetraka eo an-tsorok'i "The Donald;" ny fanovana manontolo ny fomba fiainako. na izany aza, misy ny mpiray tsikombakomba izay mizara izany andraikitra izany. Mazava ho azy, misy an'i Xi Jinping, ilay namana mifehy an'i Shina, ary noho ny fandaharam-potoanany manokana, dia nametra ny fotoana sy ny habetsaky ny fampahalalam-baovao nozaraina tamin'ny OMS (Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana) sy ny eran'izao tontolo izao momba ilay viriosy marobe izay nanararaotra ny fireneny.
Edvard Munch, The Scream (antsipirian'ny lithograph, 1895. CC BY 4 The Munch Museum)
IZA… Eny, iza Izy
Androany anefa, ny fifantohako dia ny lehilahy tompon'andraikitra WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Noho ny (na angamba na eo aza) ny fiaviany - tokony ho nahira-tsaina izy hahafantatra fa nofafana izy ary na niantso ny sinoa tamin'ny lalao matotra izay nataon'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fitazomana ny fampahalalana, na nahita làlana hafa hahazoana ny angona efa nisy izany (na dia mety nila ezaka kely aza izy io fa tsy fihaonana ara-dalàna amin'ireo tompon'andraikitra sinoa fotsiny).
Ho valin'ny loza ateraky ny aretina vaovao mitranga any Shina, dia naneho hevitra i Dr. Tedros tamin'ny 23 Janoary 2020: “Aza manao hadisoana fa maika any China ity. Saingy mbola tsy tonga maika maika amin'ny fahasalamana manerantany. Mety ho lasa iray ihany io. ”
Ny mpikambana ao amin'ny Gazety contagion niresaka tamin'i Dr. Krutika Kuppalli, ny filoha lefitry ny komity manerantany ho an'ny aretina manerantany amin'ny aretina amerikana, momba ny fandraisany ny fanapahan-kevitry ny WHO hanemotra ny fanambarana fa valanaretina. Araka ny hevitr'i Dr. Kuppalli, "Gaga aho fa tsy nanambara PHEIC ny OMS taorian'ny fivorian'ny Komity vonjy maika androany satria toa feno ny fenitry ny IHR."
Ny olona sasany dia manombatombana fa ny Dr. Tedros sy ny WHO dia tsy nihetsika firy tamin'ny vaovao voaray (sy voamarika) tany Shina noho ny azy, a. fahaiza-manao politika sy ny teritery sy / na b. ny fifandraisany manokana amin'ireo mpitondra sinoa. Ny vokatra dia izay misy ifandraisany, voadona ny baolina ary navelany hidona teo am-baravarankely ireo mpiara-monina aminy izany.
Nanokana fotoana handinihana aho mba hahalalako ny momba ilay mpiara-dia izay Tale Jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (izay marihina matetika ao amin'ny OMS). Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus no talen'ny OMS voalohany tsy nahazo diplaoma ara-pitsaboana; na izany aza, mitondra sehatra ara-politika tsy mahazatra izy (raha ampitahaina amin'ireo teo alohany). Angamba ny fahaizany manao politika no mahatonga an'io lehilahy io hahatratra sy hihazona ny fifehezana ny toerany matanjaka.
Heveriko fa nitady ny toeran'ny Tale Jeneralin'ny WHO izy noho ny fitaomana entiny; tsy ny karama (na dia tsara aza ny tombony azo); ny Tale Jeneraly dia mahazo $ 240,000 isan-taona (2018). Raha ny fanabeazana azony, ireo fikambanana matihanina sy ny fifandraisana aminy dia mety hahazo vola be dia be izy amin'ny sehatra tsy miankina.
Teraka (1965) tany Asmara i Dr. Tedros (fantatra, tamin'izany fotoana izany, hoe Etiopia) ary renivohitr'i Eritrea izy ankehitriny. Nandritra ny fahazazany dia nanatri-maso ny fahafatesan'ny zandriny lahy izy noho ny aretina izay nitovy tamin'ny kitrotro ary ny fikarohana dia nanoso-kevitra fa ity traikefa ity dia nanosika ny lalan'ny asany manontolo.
Dr. Tedros dia nianatra biolojia tany amin'ny Oniversiten'i Asmara, nahazo ny BS tamin'ny 1986. Taona vitsivitsy taty aoriana dia nahazo mari-pahaizana MS momba ny Immunology of Infectious Diseases avy amin'ny London School of Hygiene and Tropical Medicine avy amin'ny University of London (amin'ny OMS vatsim-pianarana) ary tamin'ny 2000 dia nahazo ny Doctorat Philosophy momba ny fahasalaman'ny fiaraha-monina avy amin'ny University of Nottingham izay nanaovany fikarohana momba ny vokatry ny tohodrano amin'ny fifindran'ny tazo any amin'ny faritra Tigray any Etiopia.
Raha sahirana tamin'ny fianarany sy ny fikarohana nataony i Dr. Tedros dia nitana ny toeran'ny Lehiben'ny fahasalamana (2005 - 2012) ary ny minisitry ny raharaham-bahiny (2012 - 2016) ho an'i Etiopia ary lasa mpikambana ambony ao amin'ny Tigray People's Liberation Front (TPLF) (1991-2018). Ny mpikaroka sy ny mpanao gazety sasany dia nanondro ny vondrona ho ambany noho ny demokratika, raha ny tena izy, akaiky kokoa ireo fikambanana mifandraika amin'ny kolikoly izy io. Notsipihan'i Thomas Mountain ny TPLF ho "… iray amin'ireo fitondrana mpanao kolikoly, lozabe ary fandripahana foko indrindra izay nandeha tongotra teto amin'ity planeta ity tao anatin'ny 30 taona lasa" (2020, aprily 17. Ny Gangster Head an'ny WHO). Ny fanontana 8 Mey 2020 an'ny Gazety etiopiana mametraka an'i Dr. Tedros amin'ny laharana fahenina ao amin'ny lisitry ny mpikambana ao amin'ny Komity foibe ao amin'ny Tigray Pe People Liberation Front ny 12 Mey 2020. Frank Parlato tapa-kevitra fa tompon'andraikitra manokana amin'ny famoretana mahery setra ny vahoaka Amhara izy, tamin'ny fampiasana vola fanampiana nifantina azy ireo mba hanoanana azy ireo ary handavana azy ireo tsy hanana serivisy fototra.
Larry Gostin, talen'ny WHO Collaborating Center momba ny lalànan'ny fahasalamam-bahoaka sy ny zon'olombelona, ​​dia nahita fa tsy vaovao amin'ny valanaretina i Dr. Tedros. Nandritra ny fotoana naha Minisitry ny fahasalamana tany Ethiopia azy dia voapanga ho nanaparitaka ny valanaretina kôlera any amin'ny faritra izy (2006, 2009, 2011), ary nisy vokany tamin'ny olona an'arivony maro izany. Rehefa tonga tany Etiopia izy, dia nomen'ny governemanta anarana ilay aretina, ary nantsoiny hoe Acute Watery Diarrhea (AWD). Noterena ny fikambanana iraisam-pirenena tsy hiantso azy io hoe (Cholera), na dia nisedra aretina aza ny ONU ary nanapa-kevitra fa Cholera izy. Mba hampisy fanaratsiana ny ratra dia "namporisihina" ny mpiasan'ny governemanta mba tsy hanambara ny isan'ny olona voan'ny aretina.
Na dia hitan'i Joel Simon (2020, 25 martsa, Columbia Journalism Review) aza fa i Dr. Tedros dia "nanantitrantitra matetika fa ny fampahalalana marina sy ara-potoana dia ilaina amin'ny ady amin'ny areti-mifindra COVID-19", dia hitany fa ny WHO dia "miteraka gazety manerantany- famoretana ny fahalalahana ”satria mifandraika amin'ny COVID-19. Geoffrey York dia nanapa-kevitra fa ny Dr. Tedros, "dia mahazo aina amin'ny tsiambaratelon'ny fanjakana mizaka tena - fironana izay mety nitarika azy hanaiky ny tatitra voalohany nataon'i Shina momba ny valanaretina coronavirus vaovao tamin'ny Desambra sy Janoary nefa tsy nihaika ny tompon'andraikitra tamina fanontaniana sarotra (2020, 24 aprily, The Globe and Mail).
Dr. Tedros dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahalianany amin'ny fitarihana OMS tamin'ny 24 Mey 2016 ary izy irery no hany kandidà afrikanina. Notohanan'ny Vondrona afrikanina sy ny minisitry ny fahasalamana ao amin'ny kaontinanta izy. Nanohana azy koa ny minisitry ny raharaham-bahiny any Rwanda sy Kenya, ary ny minisitry ny fahasalamana avy any Algeria. Nifantoka tamin'ny “Miaraka amin'ny tontolo salama kokoa” ny fampielezan-kevitra Tedros. Ny nanampy azy ho amin'ny fandresena dia ny Mercury Public Affairs, orinasam-panadinana amerikana monina any Etazonia; Senait Fisseha, mpisolovava iray ary mpikambana ao amin'ny mpampianatra ao amin'ny University of Michigan, ary talen'ny fandaharana iraisam-pirenena ao amin'ny Susan Thompson Buffett Foundation; ary koa ny masoivoho etiopiana ao amin'ny ONU. Izy no notohanan'ny andiana firenena afrikanina sy aziatika, anisan'izany i Sina, Etazonia, UK ary Kanada ary koa ny Bill and Melinda Gates Foundation.
Mba hampisehoana ny fiahiany ny fahasalamana manerantany, ny iray tamin'ireo hetsika voalohany vitany tamin'ny naha-DG an'ny WHO azy dia ny nanendreny an'i Robert Mugabe (praiminisitra Zimbabwe mandra-pahafatiny), ho Ambasadaoro Goodwill an'ny WHO, lehilahy iray izay nandidy ny hamonoana Olona 20,000 1980 tany Zimbabwe nandritra ny taona XNUMX. Ho fanohanana ny fanendrena azy dia nilaza ny momba an'i Mugabe ny Dr. Tedros… niasa izy nanao ny firenena "firenena iray izay mametraka ny fandrakofam-pahasalamana manerantany sy fampiroboroboana ny fahasalamana ho ivon'ny politikany." Ny valinteny ambany noho ny kintana avy amin'ny governemanta sy ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona an'ity olom-boatendry ity dia nandrisika an'i Dr. Tedros hisintona ilay tolo-kevitra.
Lehilahy mety amin'ny asa
Raha jerena ny fiavian'i Dr. Tedros, sy ny fifandraisany amin'ny tombontsoam-bahoaka sy tsy miankina, ary ny fahalalàny amin'ny fanivanana ny vaovao mifandraika amin'ny fahasalamam-bahoaka, angamba izy, olona tonga lafatra amin'ilay asa.
YouTube sy WHO
YouTube izao dia manivana ny / vaovao rehetra momba ny COVID-19 izay tsy navoakan'ny WHO. Na dia reraka aza izao tontolo izao noho ny tsy fitovian'ny fampahalalana mangataka (mitaky?) Dia mifanaraka amin'ny fanaovana sarontava sy ny elanelana ara-tsosialy ary ireo hafatra mifangaro izay miova arakaraka ny toe-tsain'ny mpitarika an'izao tontolo izao sy ny mpitantana ny hopitaly, tsy nisy mpitarika (na fikambanana) nipoitra niaraka tamin'ny famantarana ny zavatra ataony; na izany aza, samy maniry ny hamongorana ny fahalalahana sivily izy ireo.
Rehefa manana ny heviny sy / na mametraka fanontaniana amin'ny mpitondra ny dokotera sy ny mpisolovava ary ny mpanao gazety (ao anatin'izany ny OMS sy ny mpitondra sy ny fikambanana hafa / tsy miankina) dia hesorina ny fangatahana ary / na esorina amin'ny fantsom-pifandraisana toy ny YouTube sy Facebook ny resaka. Ity fanivanana ity sy ny fanilihana ireo fangatahana sy hevitra marim-pototra dia mamporisika olona an-tapitrisany tsy hatoky - saika ny olona rehetra Ny fanontaniana narosoko tamin'ny WHO dia tsy noraharahaina (hatramin'izao).
Ny sivana, ny fihazonana vaovao, ny lainga… dia mifanohitra amin'ny fanitsiana voalohany sy ny fotokevitra amerikanina fototra momba ny zon'ny tsirairay. Ny amerikana dia asaina mijanona ao an-trano, miala amin'ny arabe, na dia afaka miantsena any Walmart aza ianao, mividy fanafody, ary, raha mipetraka any Wisconsin ianao, dia afaka mivoaka hifidy.
Fa maninona no misy mino izay mpitondra na masoivoho satria saika ny rehetra dia mampiasa angona azo avy amin'ny maodelin'ny solosaina ary ny rakitsoratry ny hopitaly tsy marina. Rehefa manolo-kevitra ny hiditra ireo mpanadio trano ny mpitondra eran-tany mba handrava ny COVID-19 ary ity fampahalalana diso ity dia mahazo ora an-tapitrisany / ora an-tapitrisany ary ny kabary marim-pototra tsy raharahina, voafafa ary / na potika, dia toa manome porofo fa "mivalona" izao tontolo izao ny hevitra momba ny fahalalahana sy ny etika dia manjavona amin'ny vovoka nateraky ny lainga sy fitaka.
Ny hatao? VOTE
Iray ihany ny làlana mbola misokatra (na dia te-hanidy ity varavarankely ity aza i Jared Kushner sy ireo hafa) - dia ny mifidy. Ilay voatendry ho Demokraty ho Filoham-pirenena ankehitriny dia mety tsy hanamarina ireo boaty rehetra mety tadiavintsika amin'ny POTUS manaraka; na izany aza, tsy misy afa-tsy kandidà iray amin'izao fotoana izao (raha tsy mandroso ny governoran'i New York). Amin'ny tontolo tena izy dia mila miasa amin'ny tànana izay efa nifanarahana isika. Na mifidy manokana ianao na mifidy amin'ny alàlan'ny paositra, ny fizotrany dia iray amin'ireo làlana sisa tavela mba hisy fiantraikany amin'ny fanovana atsy ho atsy.
fitsangatsanganana # fanarenana